नेपालका हिरोको २५ लाख पारिश्रमिक, हिरोइनलाई पाँच लाख भन्दा कम ! « BBCeonlinenews
नेपालका हिरोको २५ लाख पारिश्रमिक, हिरोइनलाई पाँच लाख भन्दा कम !
अनन्त वाग्ले/अजवी पौड्याल
हिरोको २५ लाख पारिश्रमिक, हिरोइनलाई पाँच लाख भन्दा कम ! अभिनेता-अभिनेत्रीको स्टार भ्यालुमा पाँच गुणा अन्तर
काठमाडौं : काम लगभग समान नै हो। अझ गीत, पोस्टर र ग्ल्यामरका कुरा गर्ने हो भने चलचित्रमा अभिनेताभन्दा अभिनेत्रीलाई नै बढी एक्सपोज गराइन्छ, प्रचारमा ल्याइन्छ। तर, पर्दामा देखिने तिनै स्टार अभिनेता-अभिनेत्रीको स्टार भ्यालुमा भने चलचित्र निर्माणको सुरुआतदेखि अहिलेसम्म नै पाँच गुणाभन्दा बढी अन्तर छ।
जति बेला अभिनेताले एउटा चलचित्रका लागि एक लाख रुपैयाँ पारि श्रमिक पाउने अवस्था थियो, त्यति बेला त्यही चलचित्रकी को-स्टारले २० हजार रुपैयाँ पाउँथिन्। अभिनेताले पाँच लाख रुपैयाँ पाउने अवस्था आइपुग्दा अभिनेत्रीले एक लाख रुपैयाँसम्म पाउने अवस्था आयो। अहिले स्टार अभिनेताहरूले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी डिमान्ड गर्न थाल्दा त्यही चलचित्रमा समान काम गर्ने को-स्टारले पाँच लाख रुपैयाँ पाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ। स्टार भ्यालुमा यति धेरै अन्तर किन त ?
निर्माता शक्तिवल्लभ घोरासैनी भन्छन्, ‘यो बजारको खेल हो। यही खेलले स्टारको भ्यालु निर्धारण गर्छ, जो बिक्छ, उसकै भाउ बढ्छ।’ अर्का निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी भन्छन्, ‘चलचित्र व्यापार गर्न बनाइन्छ। बजारमा जुन चिजको माग बढी हुन्छ, त्यसैको मूल्य बढी हुन्छ। अभिनेताको नामले हलमा टिकट बिक्छ, त्यसैले उनीहरूको पारि श्रमिक पनि नै बढी हुन्छ।’ घोरासैनी पनि बजारको मागअनुसार नै अभिनेता छनोट गर्ने गरेको बताउँछन्।
औसत चलचित्रका कथावस्तुमा मुख्य भूमिका पुरुष पात्रको हुन्छ। त्यसैले मुख्य भूमिकामा खेल्ने अभिनेताको पारि श्रमिक धेरै हुनु स्वाभाविक भएको चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकको बुझाइ छ। कामअनुसारको दाम हुनुलाई अनौठो मान्नु हुँदैन। अभिनेता विपीन कार्की भन्छन्, ‘अभिनेताले फिल्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। काम पनि बढी गर्नुपर्छ र जस, अपजस पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले पैसा पनि बढी लिन्छन्। अभिनेत्री बेनिशा हमाल पनि मुख्य पात्रको अभिनय गर्ने अभिनेताले बढी पैसा लिनु स्वाभाविक नै भएको तर्क गर्छिन्।
महिलाको मुख्य भूमिका भएका चलचित्र नेपालमा निकै कम बन्ने र बने पनि चलाउन नसकिने अनुभव सुनाउँछन् निर्माता घोरासैनी। आफूले बनाएका चलचित्रमा कथावस्तु र भूमिकाका आधारमा अभिनेताले पाँचदेखि १० लाख र अभिनेत्रीले ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पारि श्रमिक दिएको उनले सुनाए।
अभिनेता दयाहाङ राईको बुझाइ भने अलि फरक छ। उनी भन्छन्, ‘पोस्टरले मात्र चलचित्र चल्दैन। अभिनेताको लिड रोड भएको चलचित्र मात्रै चल्छ भन्ने गलत सोचाइ निर्माताले बोकेर हिँडेका छन्।’ उनको निष्कर्षमा सामाजिक विषयवस्तुमा भन्दा बजारमुखी फिल्म नै बढी बन्ने गर्छन्। त्यस्ता फिल्ममा महिलालाई सो पिसका रूपमा मात्र देखाइन्छ। उनी थप्छन्, ‘महिलालाई सो पिसको रूपमा प्रयोग गर्दा चलचित्र बढी चल्छ भन्ने निर्माताको गलत बुझाइ छ। त्यसैले महिलाले कम भूमिका र पैसा पाउने गरेका हुन्।’
चलचित्र उद्योगमा जसको स्टार भ्यालु बढी छ उसैले बढी पारि श्रमिक पाउने वा पारि श्रमिकको दर बढ्ने मान्यता छ। अभिनेत्री हमाल पनि यो मान्यतामा विश्वास गर्छिन्। ‘स्वर’बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हमालको पहिलो कमाइ एक लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समय उनले चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’का लागि चार लाख लिएकी छन्।
हमाल भन्छिन्, ‘स्टार भ्यालुअनुसार नै पारि श्रमिक बढ्छ। तर अभिनेताको तुलनामा अभिनेत्रीको निकै ढिलो मात्र रेट बढ्ने गरेको छ।’ अभिनेताले दुई-चार फिल्न खेल्नासाथ आफ्नो पारि श्रमिक तोक्छन्। अभिनेत्रीहरू भने यो मामलामा पछाडि छन्। केही समयअघि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले ‘कायरा’का लागि १० लाख रुपैयाँ माग गरेको खबरले धेरै निर्माता तर्सिएका थिए।
२०६५ सालमा ‘आचार्य’मा ‘फ्री’मै काम गरेका अभिनेता विपिनले पहिलो पारि श्रमिक ‘लुट’का लागि ५० हजार रुपैयाँ पाएका थिए। ‘छड्के’मा चार लाख हुँदै केही महिनाअघि ‘फनफनी’का लागि १७ लाख रुपैयाँमा उनी अनुबन्धित भएका छन्। उनी चलचित्रको भूमिका र काम हेरेर आफ्नो दर तय गर्ने गरेको बताउँछन्। उनी अभिनेत्रीहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता र लगनशीलतामा ध्यान दिएर आफ्नो रेट आफैं तोक्न सुझाव दिन्छन्।
रेखा थापा नेपाली चलचित्र उद्योगकी ती अभिनेत्री हुन् जो हिरोका रूपमा एक्लै फिल्म बोक्न सक्छिन्। अहिले आफ्नै ब्यानरमा सीमित भएकी उनी अभिनीत चलचित्रमा नायकको महत्व खासै हुँदैन, तैपनि उनले नायकहरूको झैं आफ्नो पारि श्रमिक सेट गर्न सकेकी छैनन्। महिलाका विषय उठान गरेर त्यसैलाई ‘हिरो’ बनाउने उनी मात्रै त्यस्ती निर्मात्री र अभिनेत्री हुन् जसले ‘नायिका हिरो’को ट्रेन्ड सेट गर्ने प्रयास गरिन्।
नेपाली चलचित्रमा सबैभन्दा बढी पारि श्रमिक माग्ने अभिनेता हुन्, अनमोल केसी। उनको क्रेज र लोकप्रियता बढ्दो छ। चलचित्र ‘कृ’ रिलिजसँगै उनको पारि श्रमिक २० लाख रुपैयाँबाट उक्लेर ५० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्तावमा पुगेको छ। अनमोलपछि धेरै पारि श्रमिक लिने अर्का अभिनेता हुन् प्रदीप खड्का। उनले ‘लिलिबिली’का लागि २२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको चर्चा छ। त्यसैगरी पुरानामा निखिल उप्रेती, आर्यन सिग्देल अनि नयाँमा पल शाहले पनि आफ्नो रेट बढाउँदै लगेका छन्।
स्टार भ्यालुकै कुरा गर्दा दयाहाङ राई एक नमुना पात्र हुन्। नाटकबाट चलचित्रमा आएका राई अहिले मोटो पारि श्रमिक लिने चुनेका कलाकारमा पर्छन्। ‘अनागरिक’बाट डेब्यु गरेका उनले पहिलो पारि श्रमिक ३० हजार रुपैयाँ लिएका थिए। ‘कबड्डी कबड्डी’ हुँदै ‘भैरे’ चलचित्रसम्म आइपुग्दा उनले १५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेका छन्।
एउटा फिल्म र त्यसको कुनै चरित्र चल्यो भने अरू निर्माताले पनि त्यस्तै चरित्र भएका चलचित्र बनाउन होडबाजी गर्ने गरेको उनको ठम्याइ छ। उनी सुनाउँछन्, ‘नेपालमा ९० प्रतिशत बजारमुखी फिल्म बन्छन्। हलमा आउने दर्शक पनि तुलनात्मक रूपमा पुरुष नै बढी हुन्छन्। उनीहरू पनि अभिनेताकै स्टाइल हेर्न मन पराउँछन्। यस्तो पुरुषवादी सोच परिवर्तन नगरी हुँदैन।’
चलचित्रको कथा लेख्ने महिला लेखक छँदै छैनन्। उनको विचारमा पुरुषले लेखेका स्क्रिप्टमा पुरुषकै रोल बढी हुन्छ। भन्छन्, ‘महिलाको अनुभव र अनुभूति पुरुषले महसुस गर्न सक्दैन।’ महिला पात्रलाई न्याय गर्ने कथा सामान्यतः चलचित्रका लागि लेखिँदैन। त्यसैले चलचित्र क्षेत्रको स्क्रिप्ट लेखनमै महिलाहरू आउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अभिनेत्री र अभिनेताको पारि श्रमिकमा कति अन्तर छ भन्ने स्पष्ट तथ्य बाहिर नआएको बताउँछिन् अभिनेत्री दिया मास्के। आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘कागबेनी’मा आफूले अभिनेताबराबर पारि श्रमिक लिएको उनको दाबी छ। भन्छिन्, ‘समाजमा नै पुरुष र महिलाबीच व्यापक विभेद छ। यही रूप चलचित्रको पारि श्रमिकमा पनि देखिएको हो।’
मास्केको विचारमा पनि पपुलारिटी र मार्केट भ्यालुका आधारमा कलाकारको पारि श्रमिक तय हुने गर्छ। भन्छिन्, ‘महिला पात्रको लिड भूमिका भएको चलचित्र बन्नुपर्छ। महिलालाई मुख्य जिम्मेवारी दिने कथा लेखिनुपर्‍यो भन्ने त लाग्छ नै। तर, सामाजिक संरचना नै पुरुषप्रधान भएकाले संस्कार परिवर्तन हुन केही समय लाग्छ।’ साभार अन्नपुर्ण पोस्टबाट